Faha-58 taona : Maro ireo hetsika entina hanamarihana ny fetim-pirenena -
AccueilSosialyFaha-58 taona : Maro ireo hetsika entina hanamarihana ny fetim-pirenena
Faha-58 taona : Maro ireo hetsika entina hanamarihana ny fetim-pirenena
11/06/2018 admintriatra Sosialy 0
Na dia ao anatin’ny savorovoro politika aza, dia mitohy ary mivonona hatrany amin’ny fankalazana ny fetim-pirenena ny vahoaka malagasy sy ny fitondrana. Misy hatrany ireo hetsika atolotra ny Malagasy rehetra ho fiomanana amin’ny fankalazana ny faha-58 taona nahazoana ny fahaleovantena. Taorian’ny teny amin’ny Coliseum ny alahady 3 jona lasa teo tamin’ny « Podium goavam-be », dia nitohy tetsy amin’ny kianjan’ny ANS Ampefiloha ny fankalazana, ka ny mpitsoka mozikan’ny governemanta no nitondra ny anjara birikiny tamin’ny fanamarihana ny fetim-pirenena. Toa ny mahazatra, mampiavaka ireto miaramila mpanakanto ireto ny fiangaliana ireo hira malagasy amin’ny endriny hafa miaraka amin’ireo zava-maneno tsofina vita amin’ny varahina, ary ny amponga sy ny langoroana.
Hetsika iray tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny fahaleovantena sy fanandratana ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy ihany koa ny « Carnaval de Madagascar », izay hotanterahina eny anoloan’ny kianjaben’i Mahamasina ny 16 sy 17 jona izao. Hetsika fanao isan-taona tetsy amin’ny araben’ny fahaleovantena, fa nafindra etsy Mahamasina ny andiany faha-4. Mandritra ireo andro ireo no hanehoana ny harena ao anatin’ny fahasamihafana, ka hanasongadinana ireo faritra 22 vahoaka iray. Aseho mandritra ny hetsika amin’ireo trano heva sy fampisehoana samihafa ny kolontsaina amin’ny alalan’ireo fomba nentin-drazana malagasy, ny fomba fiaina, ny sakafo ary ny asa tanana.
Etsy ankilan’izay dia hisy ihany koa ny filaharambe sy fanentanana hanasongadinana ny kolontsaina, ny mozika ary ny dihy malagasy amin’ny endriny maro. Mpitendy, mpandihy ary mpihira malagasy avy amin’ny lafy valon’ny Nosy manodidina ny 1000 no hanafana izany. Anisan’ireo mpanakanto sangany hanafana ny sehatra ny tarika Mage 4 sy Samoëla.
Lalao sy fialamboly navondrona amin’ny toerana iray. Fanaon’ny ankizy ary hiarahan’izy ireo amin’ny lehibe rehefa ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny fahaleovan-tena ny fitondra arendrina. Izay fahazarana izay no noraisin’ny starlette Communication sy ny Jet com, ...Tohiny